Tari-dia: Mamerina ny bilaogy WordPress voasivana ho hita indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2019 4:11 GMT
Faly ny Global Voices Advocacy mamoaka ny toro-lalana hafa Advocacy 2.0: Mirroring a Censored WordPress Blog. Natao ho an'ireo bilaogera manana bilaogy WordPress ary mihevitra fa mety ho voasakan'ny sivan'ny governemanta ny bilaogin'izy ireo ity toro-lalana izay nosoratan'i Sami Ben Gharbia (Talen'ny Global Voices Advocacy), niarahana tamin'i Rebekah Heacock (mpanampy mpikaroka ao amin'ny OpenNet Initiative) ary Jeremy Clarke (developera ato amin'ny Global Voices sady designer ao amin'ny WordPress ). Ny tanjon'ny toro-lalana dia ny hanampy ireo bilaogera hampiasa dindon-tranonkala mba hahatonga ny votoaty voasivana ho azon'ny mpamaky vakiana na dia eo aza ireo sivana ireo. Ahitana toro-lalana tsikelikely amin'ny fametrahana fitaratra ho an'ny bilaogy orizinaly WordPress izany.
Raha mikasika ny fidirana amin'ireo tranonkala sy bilaogy voaràra, mifantoka amin'ny fialàna amin'ny sivana amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana fandinganana ny ankamaroan'ireo mpiaro ny fahalalam-pitenenana antserasera. Raha zava-dehibe izany, dia tsy ampy ny fampianarana ireo mpiserasera mikasika ny fialàna amin'ny sivana. Maro ny olona tsy mahafantatra na tsy manana fitaovana fandinganana, satria lasa manakana ny lohamilina proxy sy ireo teknolojia fandinganana hafa ireo firenena izay manivana ny aterineto. Rehefa ampiasaina ny fitaovana fandinganana dia matetika misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny aterineto, ka mahatonga ny fidirana amin'ny aterineto ho miadana kokoa any amin'ny toerana izay efa ratsy ny fifandraisana aterineto.
Mba hahafahana miditra amin'ny votoatinao, dia tsy afaka miankina fotsiny amin'ny teknolojia fandinganana na fahalalana ara-teknikan'ny mpamaky anao ianao. Mijery ny zavatra ilain'ny mpiseraseranao sy mitandrina mialoha manoloana ny ezaka fanakanana ataon'ny governemantany no dingana voalohany amin'ny fanatanterahana asa famoronana izay hahatonga ny votoatin'ny tranonkalanao ho azon'izay rehetra mety ho mpamaky idirana, na aiza na aiza misy azy ireo.
Fomba iray hampitomboana ny fidirana amin'ireo tranonkala voasakana ho an'ireo mpisera aterineto any amin'ireo firenena izay manivana votoaty an-tserasera ny dindo: manamaro ny votoatin'ny tranonkala amin'ny anaran-tserasera hafa na zanaka anaran-tsehatra hafa. Mandindo avy hatrany izay fanovana natao tamin'ny tranonkala voalohany ireo dindon-tranonkala, mamela ireo mpanoratra blaogy hiala amin'ny sivana amin'ny alalan'ny fanomezana toerana maro ahafahan'ny mpamaky miditra amin'ny votoatin'izy ireo.
Mananamaro ny votoaty tsy misy famindrana
Ataovy azo antoka ny bilaogy
Mijery ny fomba nanakanana ny bilaoginao
Mahazo sy mamolavola ny anaran-tsehatra na zanaka anaran-tsehatra vaovao
Mifidy, mitroka sy mametraka plugin dindon'ny WordPress
Mamolavola ny plugin
Mijery ny loza mety hiseho amin'ny laharan'ny pejinao
Milaza amin'ireo mpamaky anao momba ny dindon-tranonkala
Ny “Mirroring a Censored WordPress Blog ” dia azo trohana amin'ny endrika PDF. Mety mila mametraka Adobe Acrobat Reader maimaim-poana ianao raha hijery izany.
Trohy azafady ny torolàlana ary ampio izahay handika izany amin'ny fiteninao.
* Ny bilaogy WordPress hampiantranoin'ny tena manokana dia iray amin'ireo tsy ampiantranoina ao amin'ny tolotra fibilaogina maimaim-poana WordPress.com, fa lohamilina misaraka mampiasa ny sehatra famoahana WordPress.org. Raha te-hahafantatra bebe kokoa, jereo ny wordpress.org.
** Ho fanoritsoritana ny tanjaka sy ny fahalemen'ny fitaovana fandinganana dia jereo: Ethan Zuckerman, “Internet Freedom: Beyond Circumvention“, My Heart's in Accra, 22 Febroary 2010.